Baarlamaanka Uganda oo u codeynaya muddo kordhin - BBC News Somali
Baarlamaanka Uganda oo u codeynaya muddo kordhin
Baarlamaanka Uganda ayaa lagu wadaa in maanta uu cod u qaaddo in meesha laga saaro xadidaadda da'da madaxweynaha.
Dhanka kale xildhibaannada dalkaasi ayaa isku mari la' in isbedel dastuurka lagu sameeyo si loo kordhiyo muddo xileedka xubnaha baarlamaanka.
Dadka dhaliilsan in meesha laga saaro xadidaadda da'da ayaa sheegaya madaxweynaha dalkaasi Yower Museveni uu doonayo inaanu weligii xilka baneyn.
Balse dadka dhaliilsan qorshahaasi ayaa sheegaya inuu muujinayo xukun jaceylka xisbiga talada haya iyo cabsida uu ka qabo doorashooyinka, sidoo kalena lagu abaalmarinayo mudanayaasha taageersan meesha ka saaridda da'da madaxweynaha.
Balse xisbiga talada haya ayaa ku doodaya in muddo kordhinta ay xildhibaannada u sahlayso inay waqti wanaagsan u helaan hormarinta deegaannadooda.